Halluu, gargartoo, ykn sarxaa cabaa duubee islaayidootaaf fayyadamuuf
Halluu fili, kana booda tarree keessa halluu cuqaasi.
Gargartoo fili, kana booda tarree keessa halata gargartoo cuqaasi
Cabsuu fili, kana booda halata cabsuu cuqaasi.
Duubbee islaayidiitiif calaqqee fayyadamuuf
Calaqqee mara akka duubbee islaayiditti mul'isu dandeessa, ykn duubbee sasxa'ee uumuuf, calaqqee daltuulu dandeessa.
Yoo calaqqee maamiloo duubbee isalaayidiitiif fayyadamu barbaaddee, Qaaqa Qindaa'ina Fuulaa cufi, kana booda Dhangii – Bal'ina fili. Caancala Suurxiqqoowwan cuqaasi, kana booda Alaaguu cuqaasi. Calaqqee alaaguu barbaadduu mul'isitti Bani cuqaasii. Yemmuu gara caancala Duubbeetti deebitu, calaqqeen alaagdee tarree Suurxiqqoo keessatti taa'a.
Fooyyeffamni kuni galme pirezanteshiinii ammaa qoofaaf fayyada.
Mul'annoo hundataa cufuuf, Mula'nnoo Baratamoo fili.
Qajoojichaaf maqaa galchi. Akkaakuu kana "Qajoojiilee kiyya" kan jedhuurraa hin jijjiirin. Tole cuqaasi.